Cristie Kerr အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအသေးစိတ်
Cristie Kerr: အ LPGA Tour အပေါ်ညီ Winner
Cristie Kerr ဟာ 2000 ပြည့်နှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆယ်စုနှစ်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက် LPGA Tour အပေါ်ထိပ်အမေရိကန်ဂေါက်သီးသမားနှင့်သူမ၏ချပြီးနှင့်သင်တန်းအပေါ်သူမ၏ပြင်းထန်သောအရိပ်လူသိများနေတဲ့မျိုးစုံအဓိကချန်ပီယံဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မွေး date: အောက်တိုဘာ 12, 1977
သူမရဲ့ပထမအမည်ကိုမကြာခဏ "ခရစ်" ဟုရိုးရာစာလုံးပေါင်းအဖြစ်စာလုံးပေါင်းမှားနေပါတယ်: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်မရှိဘဲ "Cristie" ရဲ့ "ဇ။ "
ဓါတ်ပုံများ: Cristie Kerr တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းရိုက်ချက်များ
LPGA Tour အောငျမွငျမှုမြား: 20
LPGA ချန်ပီယံရှစ်: 2010
အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open: 2007 ခုနှစ်
အဖွဲ့ဝင်အမေရိကန် Solheim ဖလားအဖွဲ့သည်, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017
အဖွဲ့ဝင်အမေရိကန် Curtis ဖလားအဖွဲ့သည်, 1996
Cristie Kerr: "? ။ သငျသညျဆွဲဆောင်မှုဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်နွှဲမဟုတ် ... ကျနော်တို့ကဒီမှာထွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိသည် - ကြယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကျနော်တို့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
Cristie Kerr သူမမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုခေါ်တော်မူသော Donald Trump နှင့်အတူအဆိုပါအလုပ်သင်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးတစ်ခု 2005 ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ထင်ရှား။ ,
ခရစ် Kerr အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ LPGA ရာထူး၏ထိပ်မှ Cristie Kerr ရဲ့ခရီးတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများမှတဆင့်အရှိန်ထို့နောက်ယုံကြည်မှုနှင့်အလေးချိန်နှင့်အတူရုန်းကန်မှုများမှတဆင့် detoured လူငယ်တစ်ဦးကို PhenomII အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
Kerr အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်မှာဂေါက်သီးတက်ကို ယူ. , 12 ကသူမတစ်ဦး 2-မသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် 1993-95 ကနေဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အငယ်တန်းမိန်းကလေးများချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Kerr သူအမျိုးသမီးအနောက်တိုင်းအပျော်တမ်းနှင့်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရခဲ့သည့်အတွက်ရာသီအောက်ပါ 1995 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ၏အမေရိကန်အငယ်တန်းဂေါက်သီးရိုက်အသင်းကကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
Kerr အမေရိကန်အပေါ်ကစား Curtis ဖလား 1996 ခုနှစ်တွင်အသင်းနှင့်အနည်းဆုံးအနိမ့်အပျော်တမ်းခဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။ ထို့နောက်အသက် 18 မှာသူမကောလိပ်အထက်ပါနှင့်လိုလားသူဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
သူမသည် Futures ခရီးစဉ်နှင့်ကစားသမားအနောက်လှည့်လည်အကြား '96 အတွက်အချိန်ခွဲ, ထို့နောက် Q-School မှာသူမ၏ LPGA Tour ကဒ်ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော် 1997 ခုနှစ်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, Kerr ပျက်ကွက်ခဲ့ရတယျ။
သူမသည်ကျောသူမချည်, သူမ၏ကဒ်ပြန်ဘယ်မှာ Q-ကျောင်း, သွားခဲ့ရသည် Se Ri Pak medalist ဂုဏ်ထူးသည်။
သူမသည် 1998 ခုနှစ်ကသူမ၏ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း 10 ဦးရရှိခဲ့ပြီးနှင့်သူမ၏ကဒ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လုံလောက်သောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်သူမမိသားစုကိစ္စများနဲ့အောင်ပွဲမပါဘဲသူမ၏ပထမဦးဆုံးတိုးချဲ့ကာလနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ အဘယ်အရာကိုအချို့သောတစ်ဦး "bratty" သဘောထားကိုချေါခရီးစဉ်အပေါ်သူမ၏အနည်းငယ်မိတ်ဆွေများကိုရရှိခဲ့ပြီး, သူ့အလေးချိန် - သူမကအမြဲအနည်းငယ်ထွားခဲ့ - သူမ၏ 5-ခြေလျင်-4 ဘောင်ပေါ် 185 ပေါင်မှ ballooned ။
ဂေါက်အမျိုးသမီးများနေ့သည်မဂ္ဂဇင်းအဆိုအရ Kerra"ကိုလေးမျက်လုံးဖက်တီး။ " သူ့ကိုယ်သူကိုခေါ် ဒါပေမယ့် 1999 ခုနှစ်မှာသူမဟာကာအာဟာရနှင့်အစွမ်းသတ္တိ, ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြငှားရမ်းထားနှင့်တစ်ဦးရန်လိုလေ့ကျင့်ရေး regimen ပါသည်။ ရရှိလာတဲ့အသွင်ပြောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာသူမ၏လူသိများခဲ့သူအချို့မမှတ်မိလောက်အောင်သူမ၏ထားခဲ့တယ်။
Kerr က 125 မှ 185 ပေါင်ထံမှထွက်သွားသူမ၏မျက်မှန်အတွက်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ရွှေရောင် tresses တစ် Perm ထံမှသူမ၏ဆံပင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နောက်ကျောပြဿနာများပျောက်ကွယ်သွား; သူမ၏လွှဲတိုးတက်နှင့်သူမပိုကောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှတဆင့်ကိုက်ရရှိခဲ့သည်။
2000 ခုနှစ်တွင်သူမပိုက်ဆံစာရင်းတွင်အမှတ် 15 မှတက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲဝါယာကြိုး-to-ဝါယာကြိုးဖက်ရှင်အတွက် 2002 ခုနှစ်တွင် လာ. , သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ် Solheim ဖလား အဲဒီနှစ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်။ ထို့နောက် 2004 ခုနှစ်တွင်သူမနှစ်ဦးကိုပြေးသမား-up, ချောနှင့်အတူသုံးကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Kerr ခြောက်လထက်ပိုထိပ်တန်း3ချောနှင့်အတူ 2005 ခုနှစ်တွင်နှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး 2006 ခုနှစ်တွင်အခြားသုံးအောင်ပွဲကဆက်ပြောသည်။
နှင့် 2007 ခုနှစ်, Kerr နှစ်ခုလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open အနိုင်ရဖို့လမ်းပိုင်းကိုဆင်းမှန်မှန်ကိုင်ပြီး, သူမ၏ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံအောင်ပွဲခံဘို့မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Kerr 2010 ခုနှစ်တွင်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိ: သူမသည် 2010 LPGA ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရသည့်အခါ - တစ်ပြိုင်ပွဲ-စံချိန် 12 လေဖြတ်ခြင်းဖြင့် - Kerr ပထမဦးဆုံးအကြိမ်များအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာနံပါတ် 1 ရောက်ရှိခဲ့သည်။
2003 ခုနှစ်တွင် Kerr ရဲ့မိခင်ရင်သားကင်ဆာရောဂါနှင့် Kerr အီဗလီန် Lauder ကရဲ့ရင်သားကင်ဆာသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမလည်းသုတေသနပြုဘို့ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်ရင်သားကင်ဆာစီမံကိန်းကိုများအတွက် Birdies စတင်ခဲ့သည်။
က Tiger Woods '' ရီးရဲလ် (နှင့်အပြည့်အဝ) အမည်ဟာဘာလဲ,
က Tiger Woods ကောလိပ်အလုပ်ရှာဖွေရေး
က Tiger Woods နောက်ဆုံး round အတွက်ရှပ်နီ Wear အဆိုပါရီးရဲလ်အကြောင်းရင်း
Davis ကမတ်ေတာသ III ကို
ပတေရုသ Alliss ဇီဝ
နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးများဂေါက်သီး: အ Legends ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ Profiles
က Tiger Woods အလေ့အကျင့်ဂေါက်သီးကိုဘယ်လိုအများကြီးပါသလား
ဘယ်လိုအတော်များများလွတ်သွားသောလျှော့ချက Tiger Woods ကတော့ PGA Tour အပေါ်ဖူးပါသလား?
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Tucker သားရေလုပ်သမား
Hubble အာကာသမှန်ပြောင်း: အယောဘသည်တွင် 1990 ခုနှစ်မှစ.
200 အစီရင်ခံစာ Card ကိုမှတ်ချက်
မူလစာမျက်နှာ Poker ပြိုင်ပွဲများ 101
တစ်ခု: Echo နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကဘာလဲ?
Ciudadaníaရေိမသန်စွမ်း menores adoptados en el extranjero
ဇီဝဗေဒဆရာများအတွက်ထိပ်တန်း 8 အခမဲ့ Apps ကပ
မှတ်စုများကို ယူ. နည်း
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း Billy Idol တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းများ
ကိုခရီးသည်များ Pros & Cons
အဆိုပါ Rajput သူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါသလား
Ping-Pong စားပွဲတင်အရွယ်အစား: အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့နေအိမ်အတွက်ကိုက်ညီ?
တစ်ဦးက Pediment သင့်နေအိမ်တစ်ဂရိဘုရားကျောင်း Make နိုင်သလား
အင်္ဂလိပ် Noun ၏အများကိန်းပုံစံ
ဂေါက်၏စည်းကမ်းများ - နည်းဥပဒေ 30: သုံးခု-Ball ကို, အကောင်းဆုံးဘောလုံး, လေး-Ball ကိုပွဲစဉ် Play စ